FIIRSO: War cusub oo ka soo yeeray guddi ka tirsan Baarlamaanka – War La Helaa Talo La Helaa
By Jabra Shaaciye	 Last updated May 22, 2019
Guddi ka tirsan aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo saaray war cusub, kaasi oo ku saabsan gabagabada howl ay wadeen labadii sano ee ugu dambeysay.
Kulan ay Muqdisho ku yeesheen guddiga dib u eegista dastuurka Golaha aqalka sare ee Baarlamaanka ayaa waxay uga warbixiyeen marxaladihii uu soo maray shan cutub oo ka mid ah dib u eegista dastuurka kaasi oo guud ahaan ka koobnaa 15 cutub.
Guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) oo ka hadlayay dhameystirka dib u eegista dastuurka ayaa uga mahad celiyay dhammaanba hay’adihii ka qeyb qaatay dib u eegistiisa, isagoona sheegay inay soo mareen duruufo adag.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareyneynaa inuu soo dhammaaday 100% dib u eegista dastuurka” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Qeybdiid oo sheegay inay ku wareejinayaan guddiga a socodka Golaha Baarlamaanka si uu howshiisa uga guto.
Guddoomiye Cabdi Qeybdiid ayaa waxa uu sheegay in meel marinta dastuurka dalka la marsiinayo la tashi lagala yeelanayo maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed si loogala tashado dastuurka dalka.
Waxa uu sheegay in dastuurka ay dhameystireen dib u eegistiisa ku jiraan qodobo u baahan in xal siyaasadeed laga gaaro, hase yeeshee ilaa iyo iminka lama oga xilliga uu guud ahaan dastuurka si rasmi ah u soo gabagaboobayo.
Dib u eegista dastuurka ayaa horay u soo maray kulamo fara badan iyo la tashiyo lagala yeeshay maamul goboleedyada dalka iyo ururrada bulshada rayidka ah inkasta oo maamul goboleedyada ay ka hor yimaadeen.
DEG DEG: Ganacsato goordhow lagu dilay Muqdisho
DEG DEG+FIIRSO: Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Muqdisho ka dib Qaraxii maanta & Amniga Villa Somalia oo la adkeeyay